Ciyaartoy Mangala oo ku biiray Man City - BBC News Somali
Ciyaartoy Mangala oo ku biiray Man City
Image caption Eliaquim Mangala oo raacaya ciyaaryahan Robin Van Persie
Kooxda Manchester City, ayaa waxa ay kooxda Porto kala soo wareegtay difaacooda Eliaquim Mangala, iyadoo ku soo gadatay lacag gaaraysa £32m.
23 jirkan u dhashay waddanka Faransiiska ayaa u dhawaa in kooxda Manchester City uu ku soo biiro bishii Janaayo, balse haatan ayuu si rasmi ah uu Mangala ugu saxiixay qandaraas shan sano ah.
Tababaraha kooxda Manchester City Pellegrini ayaa sheegay: “Ciyaaryahankan waxa uu leeyahay maskax, awood, iyo farsamo uu ku noqon karo mid ka mid ah difaacyada ugu wanaagsan Yurub.”
Waxa uu Pellegrini intaa ku daray: “Eliaquim waa ciyaartoy aan rumaysanahay inuu saameyn degdeg ah ku yeelan doono Horyaalka Ingiriiska, wuxuu ku ammaanan yahay hab dhiska jirkiisa, sida uu ula socdo ciyaarta iyo awoodda uu u leeyahay kubadda, waxaan filayaa in uu noo noqon doono ciyaaryahan weyn.”
Mangala, ayaa ka mid ahaa ciyaaryahanadii loo xushay xulka Faransiiska ciyaarihii Koobka Adduunka ee sanadkan lagu qabtay waddanka Brazil hasayeeshee ma aanu dheelin xitaa hal ciyaar.
Ciyaaryahankan ayaa noqonaya ciyaaryahankii lixaad ee ay kooxda Manchester City lasoo saxiixato xagaagan, waana ciyaaryahankii labaad oo ay ka soo gadato kooxda Porto, kaddib markii uu horay ugu soo biiray ciyaaryahanka khadka dhexe ka dheela ee Fernando ee u dhashay waddanka Brazil oo ay ku soo gateen lacag gaaraysa £12m.
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexda kaga dheeli jiray kooxda Chelsea ee Frank Lampard, ayaa si amaah waxa ay Man City uga soo qaadatay kooxda New York City FC, halka ciyaaryahanka isna ka dheela khadka dhexe ee Bruno Zuculini ay City ka soo qaadatay kooxda Argentina ee Racing Club.
Goolhaye Willy Caballero, ayey Man City kaga soo gadatay £4.4m kooxda Malaga, halka difaacii hore ee kooxda Arsenal Bacary Sagna uu si xor ah ku yimid kooxda.
Hasayeeshee heshiiska ciyaaryahan Mangala ayaa qaatay waqti ka dheer intii la qorsheeyay.
Mangala, ayaa xirfadiisa ka soo bilaabay kooxda Standard Liege sanadii 2008-dii, sanadkii ugu horreeyayna waxa uu ku guulaystay horyaalka, ka hor inta aanu ku biirin kooxda Porto 2011-kii.
Waxa uuna kooxda Burtiqiiska kula guulaystay laba horyaal, iyadoo markii ugu horreysay ee uu u saftay xulkiisa Faransiiska ay aheyd ciyaartii uu xulka Uruguay kaga adkaaday 1-0 bishii June sanadii 2013-kii.